Taphni Viidiyoo ittiin bohaaruuf bira taruun dinagdeef - BBC News Afaan Oromoo
Taphni Viidiyoo ittiin bohaaruuf bira taruun dinagdeef
Goodayyaa suuraa Taphoonni Viidiyoo diinagdeef gumaacha olaanaa taasisaa jiru
Osoo dargaggeessi Piitar Samson jedhamuu fi hiriyoonni isaa muraasni bara 1962 tti 'Spacewar!' hin uumne ta'ee, silaa wanti miira keenya rarraasee hir'iba nu dhorku hin yaadamu ture.
'Spacewar!' tapha viidiyoo isa duraa Indastirii tapha viidiyoo, kan har'a dinagdee addunyaa jijjiiru keessatti gahee olaanaa bahaa jiruuf karra bane dha.
Barataa Inistiitiyuutii Teknooloojii Masashuseets (MIT) kan ta'e Piitar, gaaf tokko osoo gara mana isaa galaa jiruu, samii keessatti Miitiwoorii darbatamtu tokko argeetii yaadni tapha kanaa kalaquu kan dhufeef.
Duraan Kompiitarri hojii baankii fi Waraanaaf qofa ture kan tajaajilan.
Jalqaba bara 1960n keessa garuu MIT'n Koompiitarii wantoota nama bohaarsu danda'an akka dalagan gochuu eegale.
Baruma sana MIT'n Kompiitara haaraa PDP-1 jedhamu ajaje. Guddinni isaa amma kattanneessaa tokko kan gahuu fi humna guddaa kan qabu dha.
Goodayyaa suuraa PDP-1 kalaqa tapha viidiyoo isa jalqabaa keessatti shoora olaanaa qaba
Qorataan dargaggeessi Istiiv Ruusel jedhamuu fi hiriyoonni isaa wayita waa'ee PDP-1 dhagaa'anitti, akkamiin dandeettii kompiitarichi agarsiisuu akka danda'an mala dhahu eegalan.
Asoosama saayinsii hedduu dubbisaa waan turaniif, tapha viidiyoo 'Spacewar!' jedhamu kan namoonni lama hawaa (samii) keessa xiyyar-samiin wal waraansa taphatan kalaqan.
Namoonni dhimma kanarratti fedhii fi dandeetti qaban kan biroos itti dabalamuun, wantoota adda addaa itti ida'uun tapha kana haalan fooyyeessan.
Ammuma teeknoolojiin babal'ateen, gatiin kompiitaraa gadi bu'aa deemuun indastiriin tapha viidiyoo/Video game/ dagaagaa dhufe.
Wayita ammaatti galiin indastiriin taphoota kompiitaraa argamsiisu kan indastiriin fiilmii argamsiisuun ni dorgoma.
Goodayyaa suuraa Taphattoonni taatota taphichaa ciccimoo ta'an gurguratu
Maallaqa taphoota kana bituuf baasaniin alattis, taphattoonni ciccimoon taatoota taphicha keessa jiran qarshiidhaan warra kaanitti gurguratu. Kanarrayis namoonni hedduun galii waan argataniif carraa hojii ta'eefii jira.
Oggeessi tapha viidiyoo Jeen Makgoonigaal jedhamu akka shallageetti, bara 2011 tti biliyoona walakkaa ta'an guyyaatti sa'aatii 2 fi isaa oliif tapha viidiyoo taphachuun dabarsu. Lakkoofsi kun yeroo dhiyootti biiliyoona lama gahuu akka danda'u tilmaamees ture.
Bara 2016 ttis ogeeyyiin dinagdee, qorannoo waa'ee gabaa humna namaa Ameerikaa irratti hojjetan dhiyeessanii turan.
Dinagdeen biyyattii guddataa akka jiru fi ammeentaan hojii dhabdumaa gadi aanaa akka ta'ee, haa ta'u malee gariin dargaggoota hedduun hojii yeroo idileen alaa akka hojjetan; gariin ammoo cirumaa hojii akka hin hojjenne qorannichi kan mul'ise.
Dargaggoonni hojii hinqabne kunneenis hedduun isaanii mana maatii isaanii ciisanii tapha viidiyoo kana taphachaa oolu. Garuu ammoo, osoo hojiirratti boba'aniiru ta'ee jarri kun hangam guddina dinagdee keessatti gumaachu akka malan tilmaamuun nama hindhibu ta'a.